Food, Drink & Recipes » ဟော့(ထ) တူ သ ပေါ့(ထ) – Steamboat @ Suki @ Hot Pot	30
ရန်ကုန် က ဟော့ပေါ့နဲ့ ဘာဘီကျူးဒါက မွမွ ဝေ ရဲ့ ဟော့ပေါ့.။
Credit to Poe Phyu Thant ~~~~~~ ပုဇွန်ဆိတ်နဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ British Leek, မှို၊ ဝက်အူချောင်းကြော်၊ မုန်လာဥနီ၊ Celery ပါ.. Hot Pot stock ချက်ဖို့ ဒါတွေကို အရင်ကြိတ်ပါတယ်… ပြီးတော့ အိုးပူပူထဲ ခုလိုတစ်ပုံစီ ပုံပြီးထည့်ထားပါတယ်.. ခဏနေမှ ရေနွေးကို အိုးတစ်ဝက်လောက် လောင်းထည့်ပြီး တည်ထားလိုက်ပါတယ်.. ပြီးရင် ငရုတ်ကောင်းစေ့နည်းနည်း၊ နှမ်းဆီ၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ဆားနဲ့ ငံပြာရည်နည်းနည်းထည့်ပါတယ်.. ကြက်ဥနှစ်လုံးလောက်လည်း ဖောက်ပြီး ခေါက်ထည့်လိုက်ပါသေးတယ်.. အရည်ပွက်ပွက်ဆူလာပြီး အရသာက ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆို အဖတ်တွေကို ဇကာနဲ့ ဆယ်ထားလိုက်ရုံပါပဲ.. Hot Pot stock ရပါပြီ..
ထိုင်းမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ MK Suki ရဲ့ Soup Base စပ်နည်းက ဒီလိုပါ … ။ ရေ ၂-လီတာကို ပွက်ပွက်ဆူအောင်ကြိုပြီး မီးပိတ်လိုက်ပါ ။
ဟော့ပေါ့အတွက် အရိုးပြုတ်ရည်ဆိုရင်တော့ … ကြက်+နံနံပင်အမြစ် ၊
ထိုင်းဆိုင်တွေမှာ မီးဖိုရယ် မြေအိုးလေးရယ်နဲ့ ရောင်းတဲ့ … Jim Jum ဆိုတာတွေ့ဖူးကြမှာပါ ။ အဲဒါကတော့ ရှင်းပါတယ် … ကြက်အရိုး/အသားကို ပဒဲကော စပါးလင် ဂျင်း ငရုပ်သီးစိမ်းမီးကင် ကြက်သွန်ဥသေးမီးကင် ငံပြာရည်နဲ့ပြုတ် ။
အောင် မိုးသူ says: ခုတလော ဟော့ပေါ့ပဲစိတ်ထဲရောက်နေတယ် ကွကိုယ်လုပ်စားကြည့်ဦးမှပါလေ။ ဆူကီကိုလည်း စိတ်ဝင်စားတယ်။ အူးကျောက်စ်ပြောမှသတိရ အသားမှုန့်ထည့်ရင် ရေငတ်လို့မဆုံးဘူး။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အရိုးကို တနေကုန်ပြုတ်ထားရင် အသားမှုန့်ထည့်စရာမလိုဘူးး
may july says: အားးးကြီးးကြိုက်စ် …
ဇီဇီခင်ဇော် says: လာအားပေးတာကျေးကျေးပါ။
ကြည်ဆောင်း says: Hot Pot ပဲ ခေါ်ခေါ်….
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဆီမပါတာရယ်
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဒါမျိုးတွေက လူများမှ စားလို့ကောင်းတာရယ်.. ကိုယ့်ဘေးနားရှိတဲ့သူတွေကလည်း အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ရင် အဖော်စပ်လို့ မရဘူး… ဆိုတော့ အရမ်းကြိုက်တဲ့ ဟော့ပေါ့ကို ဆိုင်မှာစားရင်စား.. မဟုတ်ရင် သူများဆီ ကပ်စားမှပဲ ရမယ်.. ဟိဟိ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခါတလေတော့ အဲလိုမဟုတ်ပဲ။
Wow says: အမှန်ကဟော့ပေါ့ကို အိုက်လောက် ခွေဇီ မဖြစ်ဖူးရယ်…
တခါ အ၀စားဟော့ပေါ့ဆိုင်မှာ သွားစားတာ.. ကွကိုယ် ဖုတ်ကင်စားရတာနဲ့ လုပ်ရတာနဲ့ စားရတာ မကာမိ စားကောင်းတယ်လဲ မထင်လိုက်… အိုက်ထဲက သိပ်မစားဖြစ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဟေးဟေးဟေးးး
Mike says: .ဟော့ပေါ့တော့ကြိုက်တယ်..၀ီလေးနဲ့ပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ဇီဇီခင်ဇော် says: ငင့်။
Alinsett @ Maung Thura says: .ရန်ကုန်မှာ ဟော့ပေါ့ဆိုင်တွေက ဈေးမသေး….
လစာဝင်ငွေရှိတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်… မဖြစ်နိုင်ရုံတမယ်… စာရကံ ပါတာပါ။ ကိုယ်တိုင် လုပ်စားဖို့ကျတော့… ပါဝင်တဲ့ အမျိုးအမယ်တွေ များတာ…
အဲ့လိုနဲ့ပဲ… ကြိုက်နှစ်သက်မိ… စားချင်မိသော… အစားအစာတမျိုးကို…မစားရရှာတာ..နှစ်လ အလီလီကြာပါရော…. ဒီပိုစ့်လေးကိုတော့ သိမ်းထားပါတယ်… မမဂျီးရေ… ။
kai says: Hot pot ဆိုတော့.. Hot Dog နဲ့အမျိုးတော်သလားတော့မသိ..။
ဇီဇီခင်ဇော် says: shabu shabu ဒီမှာတော့ အတော် ဈေးကြီးတယ်။
black chaw says: အခုတလော ကြေးအိုးထက် ဟော့ပေါ့ ကို ပိုကြိုက်နေမိတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျေးကျေးပါ ကိုဂျီးဘက်ရေ။
အောင် မိုးသူ says: ဒီမှာလည်း Shabu Shabu ရှိတယ်နော် အကင်ကော ဟော့ပေါ့ကော ဆူရှီကော ဘူဖေးစနစ် တစ်ယောက်ကို တစ်သောင်းခွဲပါ။
CharTooLan says: အချိန်ကန့်သတ်ထားဒယ်လေ စိတ်ကြိုက်ထိုင်စားလို့မရဝူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်တယ် အဲ့ဆိုင်က နည်းနည်းကြီးကျယ်တယ်။ သွားတော့မစားဖူးပေမယ့် ချင်ကြာပူ မှာစားခဲ့တဲ့ ဆိုင်အတိုင်းပဲ အချိ်န်က တစ်နာရီလား တစ်နာရီခွဲဆိုလားပဲ။
Was this answer helpful?LikeDislike 2280
Ma Ei says: အဲ့ဒီ အိုးပူကို စားသာစားရ ဘ၀င်မကျချင်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျနော်ကတော့ မောထာ။
aye.kk says: ဒီရောက်ခါစက
ဇီဇီခင်ဇော် says: အကင် မပါပဲ ပြုတ်တာချည်းပဲ ဆိုရင် တော့ မညှော်ဘူး နော့ တီအေးရေ။
ဟေသီ says: ဟိုနေ့ကတင် နေမကောင်းလို့ ဆေးခန်းမသွားဘဲ အိုးပူကြီး တီးပစ်လိုက်တယ်… သွားရကျိုးနပ်ပါတယ် နောက်နေ့ကျ သူ့ဘာသူ နေပြန်ကောင်းသွားတယ်…
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟိဟိ။
kai says: ဗမာ့အိုးပူဆိုပြီး.. .. တို့စရာအတို့အမြုတ်တွေရေနွေးချိုတချက်ဖျော…ငပိရည်ပျော့ပျေ့ာလေးနဲ့.. တို့စားလို့မရဘူးလားမသိ..။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲ။ မြန်မာ ငပိကတော့ အရသာပြင်းတယ်။